Xog dhameystiran: Deyn cafinta Somalia, halka ay mareyso, guulaha la gaaray iyo waxa dhiman - BANDHIGA
Wasiirkii hore ee Qorsheynta iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Caynte ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa facebook kula wadaagay shacabka xog ku saabsan barnaamijka deyn-cafinta Soomaaliya, oo uu ka mid ahaa dadkii soo billaabay.
Soomaaliya waxaa lagu lahaa lacag kor u dhaafay 5.2 bilyan oo dollarka Mareykanka ah, waxaana ku lahaa labaatameeyo dal iyo bangiyo caalami ah. In ka badan kala bar lacagtaas waa dulsaarka amaahda (interest of principle).
Marka laga soo tago bangiyada lacagtaas nagu leh oo kala ah: World Bank, IMF, AfDB iyo IsDB, waxaa jira dhowr iyo labaatan dal oo lacagtaas badankeed aan uga amaahannay agab (isugu jira hub iyo saanad kale) iyo lacag caddaan ah. Dalalkaas waxay ku mideysan yihiin Naadiga Paris Club.
Sannadkii 2015-kii ayay IMF iyo World Bank go’aansadeen in Soomaaliya buuxisay shuruudaha barnaamijka Dalalka Deyntu Ragaadisay ee Misana Saboolka ah (Highly Indebted Poor Countries ama HIPC). Barnaamijkaas waxaa udub dhexaad u ah Barnaamijka Korjoogteynta Dhaqaalaha (Staff Monitoring Program) kaas oo ah imitixaan aad u adag oo loo maro dhabbaha cafinta amaahda.
Tan iyo 2016-kii, Soomaaliya waxay 4 goor ku baastay imitixaankaas, waana sababta keentay in ugu dambeyn shalay la gaaro yool dhexaadka loo yaqaanno “Decision Point” oo ah meesha ay IMF iyo World Bank ku qaataan qaraarka ah inay naga cafiyaan dulsaarka amaahda. Soomaaliya waa dalkii 37-aad ee gaara yoolkaas.
Balse, imtixaanka ka sokow, qaraarka IMF & World Bank waxaa fududeeyay dayn ku meel gaar ah (bridge loan) oo ay na siiyeen dhowr dal oo ay ugu horreeyaan Norway iyo UK. Dayntaas waxaa lagu bixiyey dulsaarka amaahda.
Amaahda soo hartay waxaa go’aankeeda gaari doona dalalka ku bohoobay naadiga Paris Club, waxayna sida lagu wado oggolaan doonaan inay Soomaaliya ka cafiyaan deynta ay ku leeyihiin, waase haddii Soomaaliya ku baasto imitixaanno horleh, kana adag kuwii hore.
Muddada uu imtixaankaas soconayo waa ugu yaraan 3 sano, waxayse qaadan kartaa in ka badan 10 sano! Haddii lagu baaso imtixaankaas, Soomaaliya waxay gaareysaa yoolka ugu muhiimsan ee barnaamijka, oo ah midka loo yaqaanno “Completion Point” ama “Barta Dhammeystirka”.
Marka ay dalalkaas cafiyaan deyntooda oo dhan, wali waxaa Soomaaliya ku haraya 557 million oo la rabo inaan annagu iska bixinno.
Dalal badan oo ay Mozambique iyo Sri Lanka ugu horreeyaan ayaa, markii laga cafiyey amaahda kaddib, waxay ku qarqameen amaah horleh oo ay inteeda badan ka qaateen China. Dhabbahaas waxaa imminka ku socda Kenya iyo Itoobiya. Amaahda laga qaato China masoo marto bangiyada caalamiga ah, waana mid ay shuruuddeedu sahlan tahay.
China waxay dhowrkii sano ee lasoo dhaafay la wareegtay dekedda ugu weyn Sri Lanka iyo airport ka caasimadda Mozambique, kaddib markii dalalkaas iska bixin waayeen amaahda bilaa xuduudda ah ee China.
By : Press room Tags: guulaha la gaaray iyo waxa dhiman halka ay mareyso Ka bogo xog dhameystiran oo ku saabsan deyn cafinta Somalia
Mareykanka iyo Talyaaniga: Tirada dadka uu soo ritay Coronovirus oo kor u kacday